गौचन हत्याकाण्ड : कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
ARCHIVE, COVER STORY » गौचन हत्याकाण्ड : कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
दुई महिना अघि सेटिङमा मिलाएको १२ अर्बको हुलाकी राजमार्गमा गौचनले अन्य ठेकदारलाई कमिशनमा दिएको तर गौतमलाई दिएका थिएनन् । कमिशन नपाएपछि गौतमले सबै सूचना समिरमान बस्नेत पु¥याएर गौचन र लामा थरका एक ठेकदारलाई बिगत एक महिना अगाडी देखि धम्क्याउँदै आएका थिए । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।